देउवा देशका लागि कति घातक ? – Sourya Online
अनुषा थापा २०७८ असोज १० गते ७:१८ मा प्रकाशित
पदका लागि अर्काको पार्टी मात्रै होइन आफ्नै पार्टी पनि फुटाउन पछि नपर्ने व्यक्ति हुन् देउवा । अहिले पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिना बितिसक्दा पनि पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् देउवाले । भन्छन् नि उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन । देउवा पनि त्यसमै पर्छन् । कसैले उचालेर कुर्सीमा लगेर राखेको प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सक्ला भनेर नसोचे पनि हुन्छ ।
गत वर्ष झैं यस वर्ष पनि दसैँको मुखमा कोरोनाको थप खतरा बढेको छ । अधिकांश नेपाली रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न देशमा काम गर्न जान्छन् । मजदुरीका लागि छिमेकी देश भारत जानेको संख्या लाखौँ छ । कामको लागि खाडी मुलुक र पढ्नका लागि राम्रो मुलुक जानेको संख्यामा पनि कुनै कमी छैन । उनीहरू वर्षौं विदेशमा बसेका हुन्छन् । काम गरेर कोही आफ्नो समयावधि पुगेपछि फर्कन्छन् । कोही म्याद थपेर उही बस्छन् । यतिबेला उनीहरू दसँै मनाउनलाई प्लेनमा नेपाल भित्रिरहेका छन् । भारतबाट स्थल मार्ग हुँदै दसँैका लागि नेपाल फर्किनेको लर्को पनि उत्तिकै छ । कुनै पनि देशमा कोरोना हटिसकेको छैन । झन् भारतको त कुरै छाडौँ ।
विदेशबाट फर्किएकाहरू सिधै आफ्नो घर गइरहेका छन् । चाडबाड आफ्नो घर परिवारसँग मनाउन र आफन्तसँग भेट गर्न नेपाल फर्किएका हुन् । तर, उनीहरूलाई कोरोना लागेको रहेछ भने उसको परिवारको साथै टोलछिमेकलाई नै कोरोना सर्ने खतरा बढेको छ । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा पनि कोरोना परीक्षण गरेको छैन । नाकाबाट भित्रिनेहरूको पनि कोरोना परीक्षण भएको छैन । कोरोना संक्रमण छँदै छ भने मुत्युदरमा पनि कुनै फरक परेको छैन । काठमाडौ उपत्यकालगायत अन्य जिल्लामा पनि निषेधाज्ञा जारी नै छ ।
अहिले जनताले सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न बनाएको मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । सरकारले पनि अनुगमनमा खासै चासो दिएको छ जस्तो देखिँदैन । उपत्यकामा रोजगारीका लागि बसेका सर्वसाधारण दसैं मनाउनका लागि आफ्नो जन्मथलो फर्किंदै छन् । उपत्यका छोड्नेको संख्या प्रत्येक दिन बढिरहेको छ । स्रोह श्राद्ध लागेसँगै गाउँ जाने मान्छे ह्वात्तै बढेका हुन् । गाडीहरू पनि भरिभराउ यात्रु बोकेर बाहिर जिल्ला छुटेका छन् । यदि उनीहरूलाई कोरोना लागेको रहेछ भने परिवारलाई सर्छ । उसको टोल छिमेक नै अस्तव्यस्त बन्छ । सरकारले अहिले परीक्षणमा त्यति ध्यान दिएको छैन । चाडबाड मनाउने नाममा वा रमाइलो गर्ने नाममा मृत्युको मुखमा हामी नपुगौँ र आफ्नो परिवारलाई पनि नपु¥याऔँ । अब उपत्यकाभन्दा गाउँगाउँमा कोरोना फैलन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । अब किनमेलको नाममा हुने भिडभाड सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्दैन । बजारमा भिडभाड ह्वात्तै बढिसकेको छ ।
सरकारले लामो दुरीका गाडीहरूको टिकट खुलाइसकेको छ । टिकट काट्ने ठाउँमा भिडभाड हुन्छ । कलंकी, कोटेश्वर, बल्खु, चाबहिलमा गाडी चढ्नका लागि यात्रुहरूको एकदमै भिडभाड देखिन्छ । गाडी चढ्ने यात्रुहरूले मुखमा मास्क नलगाएका मात्रै होइन कुनै पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेका छैनन् । कोरोना हटिसकेको जसरी गाडीमा चढेका छन् । बाटोमा हिँडेका छन् । न व्यापारीले सरकारको मापदण्ड पालना गरेका छन् । न यातायात व्यवसायीले पालना गरेका छन् । रात्रिकालिन व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट, पार्टीप्यालेस र होटलहरू पनि सरकारको मापदण्ड पालना गरिएको देखन्न । यी व्यवसायीहरू कसरी हुन्छ कमाउधन्दातिर लागेका छन् । मापदण्ड पालना नगर्ने व्यवसायीलाई अनुगमन गरी, कारबाही गर्ने, हुँदै भएन भने व्यवसाय नै बन्द गर्ने सर्तमा सञ्चालन गर्न दिएको थियो । तर, अहिले उपत्यकाका तीन जिल्लाका सिडिओहरूले अनुगमनमा रुची देखाएका छैनन् ।
सिडिओहरूले व्यापारीको मिठोमसिनो खाएका होलान्, त्यही भएर चुप लागेर बसेका छन् भनेर सर्वसाधारणहरू नै भन्न थालिसकेका छन् । केही दिन अघि व्यापारीहरूले गृहमन्त्रीलाई भेटेर निषेधाज्ञा हटाउनको लागि ज्ञापन पज्ञ बुझाए । गृहमन्त्रीका आफन्त र नजिकका मान्छेहरूले व्यापारीहरूसँग आर्थिक लेनदेनमा भक्तपुर र काठमाडौंका साविकका सिडिओ सरुवा गरे । अहिले नयाँ सिडिओ आइसकेका छन् । निषेधाज्ञा हटाइएको छ । यसको दोष सिडिओलाई दिने कि गृहमन्त्रीलाई ? जनताले दोष दिइरहेका छन् सिडिओलाई । सिडिओको कमीकमजोरीले कोरोना जोखिम हुँदाहुँदै निषेधाज्ञा हटाइएको छ भनेर सर्वसाधारणहरू गुनासो गरिरहेका छन् ।
सिडिओ त एउटा कर्मचारी हो । गृहमन्त्रीले सरुवा गरेको ठाउँमा जानैपर्छ । गृहमन्त्रीले भनेको कुरा मान्नै पर्छ । तर, व्यापारीहरूको गृहमन्त्रीसम्म पहुँच रहेछ । व्यापारीहरू यति बलिया छन्, प्रधानमन्त्रीलाई सिधै भेट्न पाउँछन् । किनकि व्यापारीहरूले राजनीतिक पार्टीलाई चन्दा दिन्छन् । व्यापारीहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ताजस्तै बनेका छन् । व्यापारी नभई राजनीतिक दललाई कसले चन्दा दिन्छ ? पार्टी कसरी चल्छ ? अहिलेका गृहमन्त्री यसअघि पनि पटकपटक मन्त्री भएका व्यक्ति हुन् । उनको जनता र राष्ट्रलाई भन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ लिने छवि जनता माझ परेको छ ।
शेरबहादुर देउवा यसअघि चारचोटी प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । चारैपटक असक्षम ठहरिएका देउवाले अब पनि केही गर्लान् जस्तो देखिन्न । पदका लागि अर्काको पार्टी मात्रै होइन आफ्नै पार्टी पनि फुटाउने पछि नपर्ने व्यक्ति हुन् देउवा । अहिले पाँचौँचोटि प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिना बितिसक्दा पनि पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् देउवाले । भन्छन् नि उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन । देउवा पनि त्यसमै पर्छन् । कसैले उचालेर कुर्सीमा लगेर राखेको प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सक्ला भनेर नसोचे पनि हुन्छ । मास्क नलगाइकन बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई प्रहरीले कारबाहीसमेत गरेको देखिँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनतालाई मास्क लाउनुस् कोरोना अझै छ है भनेर सूचना पनि सार्वजनिक गर्दैन ।
अर्थ मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको छ । सबै ठाउँको विकासको बजेट कट्टा गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट पाएको छ । त्यो बजेट सिध्याउनका लागि र कमिसन खानका लागि स्वास्थ्यमन्त्री ज्यान फालेर सामान खरिद गरेका छन् । चलाउन नजानेको सामानहरू पनि खरिद गरिएको छ । अहिलेको स्वास्थ्यमन्त्री व्यापारी हुन् । उनको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो व्यापारिक लगानी छ । अन्य क्षेत्रमा पनि उनको लगानी छ । राज्यलाई राजस्व छल्न र जनता ठग्न उनले राम्रोसँग जानेका छन् । नेपाली कांगेसलाई आर्थिक सहयोग दिएर समानुपातिक सांसद बनेका व्यक्ति हुनु उनी । जनताले मतदान गरेर सांसद भएका होइनन् । प्रधानमन्त्री देउवाकी श्रीमतीको कोटामा स्वास्थ्यमन्त्री भएका हुन् । जो मान्छेले व्यापार गर्दा जनता ठग्छ, राजस्व छली गर्छ, मजदुरको पसिना चुस्छ यस्तोलाई देशको माया हुँदैन । यस्तालाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा के को सुधार हुन्छ ? केपी ओलीको सरकारले नेपालमा एक जना कोरोनाको बिरामी भेटिने बित्तिकै लकडाउन ग¥यो । देउवालाई यत्रा मान्छे मर्दा पनि फरक परेको छैन । के कोरोना नियन्त्रण भइसकेको हो ? यसको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ । अहिले पनि कोरोनाको रोगी प्रत्येक दिन बढिरहेका छन् तर क्वारेन्टाइन सबै हटाइसकिएको छ ।